Sidee looga ilaaliyaa taleefankaaga khayaanada LokiBot | Androidsis
Sida looga ilaaliyo taleefankaaga khayaanada LokiBot
DaniPlay | | Amniga, Tababarada
Dhowr bilood hadda, khayaanada LokiBot waxay dabagal ku haysay dadka isticmaala Android iyo waliba kuwa Windows, si aad u badan oo waxa ugu fiican ee kiiskani yahay inaad naftaada ilaaliso. Waxaa jira nidaamyo badan oo aan cusbooneysiin, taas oo khatar gelinaysa iyo inbadan oo taleefannada isticmaaleyaashu maalmahan.
LokiBot, oo sidoo kale loo yaqaan Loki-Bot ama Loki PWS, waa khayaano Trojan ah kaas oo dhex gala nidaamyada si loo xado macluumaadka qarsoodiga ah. Waxay u sameysaa si loo helo magacyada isticmaalaha iyo furaha sirta ah, jeebka loo yaqaan 'cryptocurrency' iyo waxyaabo kale oo badan, sida xogta marin u helka PayPal ama bangigaaga.
Khatarta LokiBot ayaa isbeddelay tan iyo markii ay soo muuqatay bartamihii 2010, mid ka mid ah noocyada ugu dambeeyay ee qarinaya faylalka xun iyo koodhadhka ilaha ee faylasha sawirada, ka fogaanshaha ogaanshaha. Qaar ka mid ah faracoodu waa Parasite, Xerxes, Mysterybot kan ugu dambeeyaana waa BlackRock, oo loo yaqaan 'May 2020'.
1 Marka waxaad ku qaadi kartaa LokiBot
2 Sida looga saaro LokiBot Android
Marka waxaad ku qaadi kartaa LokiBot
Infekshinka LokiBot waa wax iska fudud, gaar ahaan markay tahay spam, wuxuu ku yimaadaa fayl ku lifaaqan oo uu ku dhaco oo ku yimaado qaansheegatooyin khiyaano ah, amar ka yimaada degel la sheegayo, iwm Mid ka mid ah ololihii ugu dambeeyay ee LokiBot ayaa ka faa'iideystay faafitaanka si uu ugu fido adduunka oo dhan.
Waxay sidoo kale ku timid rakibayaal ciyaar been abuur ah oo ka timid Ciyaaraha Epic, horumariye caan ah oo caan ah cinwaannada sida Fortnite, oo ka mid ah cinwaannada ugu caansan xilligan. Mar haddii APK la soo dejiyey oo aaladda Android la hawlgeliyey, waxay ku guuleysatay inuu ku dhaco malware si looga faa’iideysto oo loo xado macluumaadka.
Sida looga saaro LokiBot Android
Waxa ugu horeeya ee lagama maarmaanka u ah waa in meesha laga saaro barnaamijyada shakiga leh, kuwa aadan isticmaalin oo aadan ku kalsoonayn inay xaasidnimo tahay, isticmaal xeeladda haysashada ugu yar mar walbana waxaad ka heshaa ilo lagu kalsoon yahay. Xusuusnow inaad kala soo baxdo codsiyada Play Store oo had iyo jeer hubiya inay ka socdaan shirkadaha rasmiga ah.
Tallaabo kale oo muhiim ah ayaa ah in laga gudbo aaladaha lagu ogaado, oo ka mid ah kuwa ugu fiican ka saarida khayaanada waa BitDefender Antivirus Free (bilaash) iyo MalwareBytes Security. Waxyaabaha muhiimka ah waa in la rakibo labadaba oo la baaro taleefanka hanjabaadaha suurtagalka ah ee halista u keenaya xogtaada.
Ilaalinta Malwarebytes: Antivirus & Anti-Malware
Si loo baabi'iyo barnaamijyadan aad ka shakisan tahay, waxaad ku sameyn kartaa Settings> CodsiyadaHaddii aad aragto in qalab la rakibey adiga oo aan lagaa haysan, ka saar ogeysiis hore. Kahor intaadan dhex marin labada aaladood, waxaa fiican inaad gudbiso antivirus-ka iyo anti-malware-ka, oo kugu qaadan doona ku dhawaad ​​daqiiqado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida looga ilaaliyo taleefankaaga khayaanada LokiBot
iQOO U3 waxaa lagu xayaysiiyaa Dimensity 800U waxaana lagu qiimeeyaa below 200
Sida looga hawlgeliyo habka mugdiga ah Google Earth